Movie | Muslim Info Burma , مسلم معلومات بورما
Rohiungya Genocide Video : AlJazeera English on Myanmar’s Affairs ,
AlJazeera English on Myanmar’s Affairs 1 week ago
AlJazeera English on Myanmar’s Affairs
Riz Khan – Myanmar’s election (22:31)
Frost over the World – Jared Genser (23:29)
Myanmar’s military ambitions – Part4(10:59)
Myanmar’s military ambitions – Part2(10:13)
Ko Rohingya created The Hidden Genocide 1 week ago
كامل : فلم الإبادة المخفية عن “الروهنجيا The Hidden Genocide ! ! (52:03)
Ko Rohingya uploadedavideo 1 week ago
The Hidden Genocide_The First Events
Some of the racists from Burma claimed that AlJazeera stand on side for this film. It is totally false. Most of our Burmese people in Burma, they d…
Liar Bo Thein Htay on Rohingya Genocide
Thein Htay, one of the Minister of Burma lied on the historical population rate of Rohingya. His statement was aganist with Burmese Encyclopedia th…
Rakhine Monk explained why Rakhine Terrorists killed 10 innocence Muslim Men in Taunggoke
On3June,amob rakhine terrorists attackedabus in Taunggoke and killed 10 Burmese Muslim, not Rohingya from the parts of the Burma other than R…
Rohingya woman was raped by 20 Buddhist Terrorists
A rohingya woman told her story before she died. She was raped by more than 20 Buddhist Men in Rakhine State, Myanmar according to her medical record.
Ko Rohingya subscribed toachannel 1 week ago
انطلق مركز تلفزيون الشرق الأوسط ام بي سي من لندن عام 1991 وقد مثل اللبنة الأو…
Ko Rohingya and 9,238 others liked 1 week ago
triplejtv • 2,756,194 views
The Prime Minister of Australia has sentamessage to triple j listeners, in what isaclear show of faith in Tom & Alex’s ability to predict the f…
Ko Rohingya uploadedavideo2weeks ago
Interview with Rohingya Victim in Rakhine State English Subtitles
Dozens of Innocence Muslims have been killed by Buddhist Terrorists in Rakhine-Rohingya Riots at Rakhine State of Burma. Most of them are Rohingyas…
Ko Rohingya added4videos toaplaylist2weeks ago
Hazrat Omar (RA) Series
#MBC1 – #OmarSeries – Ep29 – English Subtitles (46:09)
#MBC1 – #OmarSeries – Ep27 – English Subtitles (46:19)
#MBC1 – #OmarSeries – Ep28 – English Subtitles (46:26)
#MBC1 – #OmarSeries – Ep30 – English Subtitles (1:27:26)
Ko Rohingya created Hazrat Omar (RA) Series2weeks ago
#MBC1 – #OmarSeries – Ep26 – English Subtitles (46:15)
#MBC1 – #OmarSeries – Ep18 – English Subtitles (46:28)
#MBC1 – #OmarSeries – Ep20 – English Subtitles (46:24)
#MBC1 – #OmarSeries – Ep24 – English Subtitles (46:58)
Ko Rohingya uploaded and liked2weeks ago
Ya Taybah (Burmese Subtitles)
Nice Nasheed in Arabic for Muslim
Ko Rohingya uploadedavideo3weeks ago
President Obama Remarkable speech at the University of Yangon (Burmese Subtitles) Full
Ko Rohingya commented3weeks ago
salam, i want to get this video without english subtitles because i want to translate into Burmese (thanshwe82@gmail.com)
ستشدو الدموع – أراكان – أصوات بشرية | Arakan Tragedy Song – Human voices
Jeel Althawrah • 4,474 views
للسماع أو الحفظ للأنشودة فقط
أنشودة ستشدو الدموع ( نسخة الأصوات البشرية )
Ko Rohingya added5videos toaplaylist3weeks ago
History of Islam and Muslim
Islam: Empire of Faith. Part 1: Prophet Muhammad and rise of Islam (full; PBS Documentary) (53:55)
Islamic Art and Culture in the Renaissance—The True Moor of Venice (1:34:54)
Islam: Empire of Faith. Part 3: The Ottomans (full; PBS Documentary) (52:58)
Islam: Empire of Faith. Part 2: The Awakening (full; PBS Documentary) (53:13)
Ko Rohingya created History of Islam and Muslim3weeks ago
When the Moors (Muslims) Ruled Europe: Documentary (full) (1:42:02)
My Mother (Burmese Subtitles)
Mother is one of the greatest blessing from Allah Al-Mighty. Thank you, Allah for my mother.
President Obama Remarkable Speaks at the University of Yangon_Burmese_Subtitles_Part_I
Prophet Muhammed (Burmese Subtitles)
The official # Muhammad Response Spoken Word Muslim Version. ‘Innocence of Muslims’ Trailer
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော Video News
Hidden Genocide ကနဦးဖြစ်စဉ် မြန်မာစာတမ်းထိုးထွက်
Zaw Naing Maungdaw
အထူးသတင်း ♦♦♦ ၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၂
အယ်ဂျဇီးရား သတင်းဌာနရဲ့ Hidden Genocide (တိမ်မြုပ်နေသော လူမျိုးတုန်းသတ်ပွဲ) သတင်းဗွီဒီယိုဖိုင်ပာာ ရခိုင်ပြည်နယ် ပရိပက္ခ ရဲ့ လှုံ့ဆော်သူဇစ်မြစ် အမှန်ကို ရနိင်ဖို့ ဥပဒေပညာရှင် ၁၂ ယောက်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း မှတ်တမ်းကား တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ အသုံးကိုဘာကြောင့် သုံးရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒါရိုက်တာ Mr. Phil Rees က
ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ကို သုံးရတာကတော့ လူမျိုးတစ်ခုပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း အသေချာစီစဉ်ပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ ကိစ္စဆိုလို့ ရှိရင် ဒီသဘော အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်း သဘောတူစာချုပ်တွေမှာ ပါသလို ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေနဲ့လည်းပဲ တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ ဒီလိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ဥပမာ ဂျာမဏီမှာ ဂျူးတွေကိုသတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးကျမှ ဂျီနိုဆိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ ပြသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လူဦးရေမတိုးအောင်လို့၊ လူသား အဖြစ်ရည်တည်မှု မရအောင်လို့ ၊ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်ကွက်တာတွေ၊ ပညာရေးအရ ဖိနှိပ်တာတွေ ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ခွင့်ကို ပိတ်ပင် တားမြစ်တာဖြစ်ပါတယ်
လို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တစ်ခုမှာပြောပါတယ်။
ဒီမှတ်တမ်းကားထွက်တော့မယ်လို့ကြေညာချိန်မှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုလ ၆ ရက်နေ့ထုတ် နေ့စွဲနဲ့ ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုကို အစိုးရအဖွဲ့ က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ကိုင်တွယ်တယ်လို့လည်း ကန်ကွက်စာ မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထောက်အထားတွေကိုတော့ ကုလသမ္မဂအထွေထွေညီလာခံ၊ အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး၊ ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေက ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စမှာ အစိုးရပာာ ဘက်မလိုက် ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားချက်တွေ ကိုးကားထားတာက လွဲရင်တခြားခိုင်လုံတဲ့ ကြောင်းပြချက်ပေးထားတာမျိုးတော့ မတွေ့ရပါဘူး။
ယခုအခါမှာတော့ youtube မှာ မူရင်းဗွီဒီယိုဖိုင် သာမက ကနဦးဖြစ်စဉ် အကျဉ်းကို မြန်မာစာတမ်းထိုးနဲ့ ထွက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မူရင်းဗွီဒီယိုဖိုင် – http://www.youtube.com/watch?v=0LldB-SquyI